धन्यवाद! मैले Feed०० फिड रिडरहरू र टेक्नोराटीको २,००० मार्क तोडिदिएँ! | Martech Zone
धन्यवाद! मैले Feed०० फिड रिडरहरू र टेक्नोराटीको २,००० मार्क तोडिदिएँ!
बुधबार, जुलाई 11, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
पछिल्लो हप्ता म थाकेका थिए। मलाई मेरो टेक्नोराटी रैंकलाई मेरो ब्लग कत्तिको सफल भयो र कहिले पनि जारी नै रहन्छ भन्नेको लागि मार्गनिर्देशकको रूपमा प्रयोग गर्न मनपर्दछ। धेरै हप्ताको लागि मैले २,००० र्या to्कि toको अविश्वसनीय रूपमा बोब गरें। एक पटक म केवल २,००० भन्दा बढी सम्म डुब्थ्यो ... र त्यसपछि म २,०2,000 to सम्म पप आउट भयो। उह। यसले मलाई बदाम चलाउन थालिसकेको थियो। मैले जताततै दुई हजार नम्बर देखिरहेको थिएँ।
२०० now आजकल धेरै लोकप्रिय छ।
यो सबैको बिचमा, मेरो ब्लगले स्ल्याशडटको गृह पृष्ठ पनि बनायो (टेक्नोराटीमा शीर्ष १०० मा)। म निराश थिएँ ... यदि स्लेशडोटले म र म उल्लेख गर्दछ भने अझै पनि त्यहाँ २,००० लाई तोड्न सकिदैन केही म गर्न सक्छु। र त्यहाँ थियो!
टेक्नोराटी २,००० मार्क मार्फत मेरो रणनीति
मेरो ब्ल्ग चिट्ठा गर्नमा मैले सिकेका जानकारी लिनको बारेमा के हो र अरुलाई यसको ब्लगमा लागू गर्न मद्दत गर्दछु? कहिलेकाँही यो सल्लाह पढ्न सजिलो छ, तर यो कार्यान्वयन कठिन हुन सक्छ! त्यसैले मैले जाने निर्णय गरे ब्लग-टिपिंग। मैले सोचे कि यो शब्दहरूमा एक राम्रो खेल हो - तर जसै यसमा हावा आउँछ, शब्द थोरै नै प्रयोग भएको छ। आशा छ कि म यो मा एक स्पिन राख्नु। मैले केवल उनीहरूको मेरो ब्यक्तिलाई सुधार गर्न सुझावहरू पुर्‍याउँदा सुझावहरू मद्दत गर्दछ।
पैसा छैन, कुनै सस्तो छैन, प्रतियोगिता छैन ... केवल नि: शुल्क मद्दत। केटा, यो काम गरेको छ! तपाईलाई धन्यवाद छ, म २,००० र्याकिंगमा क्र्यास भएको छु र यसलाई अझ धेरै लिनको लागि गति छ। यो कडा रणनीति हो ... मलाई प्रत्येक ब्लग पढ्न, निरीक्षण गर्न र अनुसन्धान गर्न आवश्यक पर्दछ र केहि राम्रा सुझावहरूको साथ आउँदछ। म सुझावहरू पुनः संगृहीत गर्न कोशिस गर्दछु - मैले साचेका प्रत्येक ब्लगको साथ अनन्य मुद्दाहरू फेला पार्न कोसिस गर्दछु।
यो चुनौती हो! यद्यपि म यति धेरै सिक्दै छु। एक अनजान लाभ: पाठकहरूले ब्लग सुझावहरू प्राप्त गर्न मेरो पोष्टलाई सन्दर्भित गर्दैछन्, र त्यसपछि उनीहरू परिवर्तन लागू गरे पछि मेरो ब्लगलाई सन्दर्भित गरिरहेका छन्! त्यो त्यस्तो चीज हो जुन मैले सोचेको पनि थिएन तर त्यसले वास्तवमै ठूलो प्रभाव पारेको थियो।
सायद सबैभन्दा ठूलो चुनौती मैले गर्नुपर्ने थियो टिप Lendo.org, एक अ English्ग्रेजीमा पनि छैन कि एक ब्लग! जे होस् मैले अनुवादकहरू केहि सामग्री हेर्नका लागि प्रयोग गरें - यो केवल पचाउन को लागी शीर्षक ब्लगमा (पढ्ने) के थियो। मैले पोस्ट एन्ड्रे र उनको लेखक डेजीको सक्दो चाँडै नै केही आश्चर्यजनक परिवर्तनहरू कार्यान्वयन गरियो - एक सुन्दर हेडर ग्राफिक सहित जुन तपाईंलाई घर मा महसुस गराउँछ र पढ्नको लागि तयार छ! मँ अन्द्र्रे र डेजीबाट ब्लगले केहि हप्तामा के गरिरहेको छु भनेर सुन्न कुर्ने छैन।
आज मैले दुई गोल गरे - 700 पाठकहरू FeedBurner र २,००० श्रेणी टेक्नोराटी। नयाँ र पुरानो, यी मार्कहरूमा मलाई ड्राइभ गर्न मद्दतको लागि मेरो पाठकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद!
मेरा नयाँ लक्ष्यहरू:
वर्षको अन्त सम्म, म मेरो फिडमा १,००० पाठक अवरोध तोड्न चाहन्छु र म वास्तवमै १,००० टेक्नोराटी रैank्कमा जान चाहान्छु। मलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाईं छोड्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने। म तपाईंलाई वरिपरि छडी गर्न आवश्यक छ!
Blog-Tipping: अतिथि ब्लगर ब्लग
मैले एउटा पोष्ट लेख्न सुरू गरें ...
तपाईंको सफलतामा Grats, डग!
जुलाई,, २०१ at 12::2007। बिहान
यो कुराकानी बिना एक ब्लग हुने छैन, Slaptijack! म साँच्चिकै पेशेवरहरूको आश्चर्यजनक समूहको लागि आभारी छु जुन यस ब्लगमा यति धेरै योगदान पुर्‍याएको छ। मलाई लाग्छ टिप्पणीहरू कुनै पनि ब्लगको सफलताको लागि प्राथमिक घटक हुन्। दुबै अन्य ब्लगहरूमा मेरो टिप्पणीहरू - र तपाईको मेरोमा।
म तपाईहरू सबैलाई साँच्चिकै आभारी छु। मैले यो कुराकानीमा थप्नको लागि पर्याप्त परवाह गर्ने तपाईं तिनीहरू बिना गर्न सक्दिन!
बृद्धि भएकोमा तपाईको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न ... तिनीहरूले तपाईंलाई ठूलो हूल दिन सक्छन् जब तिनीहरू हुन्छन् र म एकको लागि अझै पनी हुनेछ जब तपाईं आफ्नो अर्को सेटको सेट बनाउनुहुन्छ।
धन्यवाद स्टीवन! मेरो पहिलो टिप्पणी पढ्नुहोस् - यो तपाइँ सबै को लागी लागू हुन्छ। तपाईं वास्तवमै यो धेरै सजिलो बनाउनुहुन्छ!
मलाई नयाँ डिजाइन मनपर्‍यो!
म सँधै ट्वीक गर्दैछु!
तपाईंको लक्ष्य अभिमुखीकरण मनपर्दछ। यसलाई राख्नुहोस् तपाइँ त्यहाँ पुग्नुहुनेछ।
वाह! यो म जस्तै सबै विश्वबाट ब्लगरहरूलाई मद्दतको लागि ठूलो पुरस्कार हो!
यस पछि, तपाईंसँग दुई नयाँ पाठकहरू छन्, म र डेजी, तर हामी तपाईंलाई धेरै मान्छेहरू समक्ष सिफारिस गर्नेछौं! र यी 'धेरै केटा' अरूलाई सिफारिस गर्दछन् 'धेरै केटा'।
धेरै बधाई! यो तपाईंको योग्यता हो! 🙂
तपाईंले मलाई दिनुभएको अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, एन्ड्रे! कृपया हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि कसरी चीजहरूको प्रगति हुन्छ।
अवश्य! म सम्पर्क राख्छु 😉
बधाई हो डग !! =)
धन्यवाद टोनी !!!
बधाई छ। यो धेरै लामो पहिले होइन कि तपाईंले subs०० ग्राहकहरूको चिन्हमा हिट गर्नुभयो र तपाईंले यसमा थप २०० थप गर्नुभयो। तपाईं अब महान जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईले १००० पाठकहरूलाई हिर्काउनु अघि यो केवल कुरा हो।
यो सबै गति को बारे मा लाग्छ, यो छैन? म प्रचार गर्दै छु कि केहि समय को लागी - र रमाईलो छ कि यो कसरी बढिरहेको छ।
काश मैले सुरु देखि नै देख्नको लागि विकास ट्र्याक गरिएको थियो - तर मलाई लाग्छ कि यो फिबोनाचीसँग एकदम मिल्दोजुल्दो छ… 1,2,3,5,8,13,21…
बधाई छ। म पक्का छु कि उहाँ कतै जाँदै हुनुहुन्न। यदि मैले गरेको थिए भने तपाईले मलाई जहिले पनि उत्कृष्ट शीर्षकको साथ द्रुत स्क्यानको बखत पछाडि फर्काउन सक्नुहुन्छ।
धन्यवाद, टीनु! म सबै समर्थन को लागी कदर गर्छु। 🙂
जनवरी 9, 2009 मा 10: 20 एएम
मसँग केहि महिनाहरुका लागि ब्लगिंग छ र म अझै खराब यातायातमा छु र तपाईले गरेको जस्तो भंग गर्न पनि असक्षम छु। मलाई आशा छ कि यो रणनीति मेरो टेक्नोराटीको लागि पूर्ण रूपमा काम गर्दछ। धेरै धेरै धन्यवाद 🙂